Caqabado: Sababta & Maxaa Looga Dhaafo Gaadiidka Gudaha Gudaha Interneetka Google Analytics
Google Analytics wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan oo ka mid ah dadka isticmaala. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho aragti, macluumaad aad u ballaaran iyo ficil ahaanba lagu dhaqaaqi karo si aad u siin karto meel cusub oo ganacsigaaga ah. Waxaa suurtagal ah in aad sameysato falanqayntaada Google si fiican oo dhameystiran - lampade gz10 gazebo. Taas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad wax ka bedesho koontadaada oo aad raacdo dhawr tallaabo. Mid ka mid ah waxyaalihii waaweynaa ee aad sameyn kartid waa inaad ku hagaajisid Google Analytics si aad u heshid gaadiidka sharciga ah oo keliya. Waxaad soo saari kartaa aragtiyo badan oo keenaya barnaamijkan. Ma jiri doonto wax laga reebayo marka la isku hagaajinayo Google Analytics. Waa inaad sameysaa shaandheyn iyo inaad hubiso in gaadiidka bogagga uu yahay tayo sare.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital, wuxuu bixiyaa xal qiimo leh oo ku saabsan arrintan
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad xasuusato waa inaad abuurto aragti cusub ee domain kasta. Aan halkan kuu sheego in aysan suurtagal ahayn in la baddalo falanqaynta Google Analytics, markaa waa inaad abuurtaa daryeel weyn iyo fiiro gaar ah. Waa inaadan hilmaamin in filtarradu uu saameeyo dhammaan xogta la soo ururiyay ee Google Analytics..Waxay si toos ah ama si dadban u saameyn kartaa ra'yigaaga iyo lambarka hits-kaaga internetka ee aad hesho. Haddii aadan rabin inaad sifeeyo dhamaan macluumaadka bogagga, ka dibna waa inaad tagtaa qaybta maamulka oo riix badhanka baabuurta yar. Markaad sameyso, waxaad riixi kartaa boodhka muuqaalka si aad u bilowdo.
Abuuraan fiilooyin cusub
Marka aad aragtid aragtidaada, tallaabada xigta waa inaad abuurto shaandheyn cusub. Tani, waa inaad tagtaa qaybta maamulka oo guji shaashadda. Aad bay muhiim u tahay in la abuuro shaandhada maaddaama tani ay hubiso caafimaadkaaga iyo boggagaaga boggiisa. Bilowgii, ma awoodid inaad abuurto shaandhada ku habboon, laakiin waad samayn kartaa marka aad samayso waxoogaa xirfad ah oo aad ogaatid sida aad u qaadanayso heerka xiga. Waa inaadan iloobin inaad gashid cinwaanka IP-da ee shirkaddaada, sidaa daraadeed looma xirin. Waa inaad sidoo kale sheegtaa IP-yada aanad dooneynin inaad hor istaagto mustaqbalka. Tani waxay fududeyneysaa shaqadaada, waxaadna ka hortagi kartaa soo-noqoshada aragtida been abuurka ah iyo garaacidda.
Ku raaxee xogtaada la sifeeyay
Marka aad sameyso hagaajinta kor ku xusan, way ku fududaan doontaa inaad ku raaxaysato guusha. Iyadoo boggaga internetka cusub ama gaboobay, waxaad kuxirin doontaa faa'iidooyinka qiimeynta iyo falanqaynta xogta nadiif u ah goobta oo aad ka taageeri karto istaraatiijiyada iyo hadafyada shirkaddaada. Bilowga, ma fududa. Sidaas darteed, waxaad ku qasbanaan lahayd inaad waqti dheeraad ah ku qaadatid waxyaabo cusub. Xogta qaaska ah ayaa kuu sahleysaa inaad qaadato go'aanada saxda ah. Waxa kale oo ay yareysaa wakhtiga aad ku bixisid goobta oo aad abuuri karto fiilooyin badan oo adiga kugu habboon. Ma aha oo keliya tan laakiin sidoo kale waxaad awood u yeelan laheyd inaad fahamto sida booqdayaashaada iyo macaamiishaada ay sameynayaan isticmaalka guryahaaga ama bogaggaaga. Waxaa sidoo kale wanaagsan in la falanqeeyo oo lagu qiimeeyo sida ay ufilan yihiin istiraatijiyadaha suuq-geynta. Waxa ugu fiican ayaa ah in Google Analytics kaa caawiyo wax badan oo ku saabsan aragtida iyo 'filim' 'abuurista'